အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဦးအောင်မင်း၊မအောင်မြင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ.၊အသားထဲက လောက်များ နှင်.အေဘီကိုမလိုသည်.စိတ်ရောဂါ
ဦးအောင်မင်း၊မအောင်မြင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ.၊အသားထဲက လောက်များ နှင်.အေဘီကိုမလိုသည်.စိတ်ရောဂါ
by Aye Aye Soe Win (Notes) on Monday, April 29, 2013 at 10:09am
ဦးအောင်မင်း၊မအောင်မြင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ.၊ အသားထဲက လောက်များနှင်.အေဘီကိုမလိုသည်.စိတ်ရောဂါ
မြန်မာနိုင်ငံရေးက ကပ်ပါးများ၊ ပွဲစားများ၊ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန်တာ နှင်. သမတရုံးက စစ်အုပ်စု၏တပည်.များ အကြောင်း
ရထားဝန်ကြီးဟောင်း၊ လက်ရှိ သမတ၀န်ကြီးအောင်မင်း၊ ၏လခစား ၀န်ထမ်းများ----
ပွဲစား ဦး ၄ ဦး အကြောင်း ပြောပြရတော.မှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာကငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင်. လှုဒန်းငွေများ ပိစ် ဆန်တာ မှာ ပုံနေတာကို အများသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အထူး လခစား အခွင်.အရေးသမားများ ကို သမတရုံးမှာဦး၎ ဦး အဖြစ် လူတွေ သိကြပါတယ်။ လစာတွေက တော.
ဇော်ဦး ကပ်ပါး တလ ဒေါ်လာ၁၅၀၀၀.၀၀ တနှစ် တသိန်း ရှစ်သောင်း
သန်.မြင်.ဦး(ဦးသန်.မြေး) ဒေါ်လာ၁၅၀၀၀.၀၀ တနှစ် တသိန်း ရှစ်သောင်း
မင်းဇော်ဦး တလ ဒေါ်လာ၁၀၀၀၀.၀၀ တနှစ် တသိန်းနှစ်သောင်း
အောင်နိုင်ဦးတလ ဒေါ်လာ၅၀၀၀ တနှစ် ခြောက်သောင်း
( ခရီးထွက်တဲ. အချိန် စပါယ်ရှယ် တီအေဒီိအေတွေ မပါသေးပါ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ. ဦးေ၇ွှမန်းကတော. ဘယ်သူခွဲခွဲ ဒို. မကွဲ အမြဲစည်းလုံးမည် ဆိုတဲ.ဆောင်ပုဒ်နဲ.အတိပ် ကာလနဲ.မျက်မှောက် ကာလ မှာပါ ငွေ ထုတ် ကြီးနဲ.ကိုင် ဘေးက ၀ိုင်းဝိုင်းလည် ရှိနေပြီးသားခေါင်းပုံဖြတ်စီးပွားရေးသမားလုပ်ငန်းရှင် တွေ၊ သူတို.လက်မလွှတ်နိုင်တဲ. အရင်းအမြစ်အစိုင် အခဲ တွေကို ပဲ၊ ဘယ်လောက် ပြည်သူတွေ က ဝေဖန်အပြောများများ ၊ ဆက် မျက်နှာပြောင်တိုက် တောင်.ကြံ တောင်.ခံပြီးဒီသွေး စုပ်ဖုတ်ကောင်တွေရဲ. အမြတ်ကြီးစားလက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေးကိုသာ ကာကွယ်သွားကြပါလိမ်.မယ်။ဒီတော. ဒီမိုကရေစီကတော. မျှော်ရင်းဝေးနေပါဦးမယ်။ ဒီ.အပြင်ေ၇ွှ စု သင်.မြတ်မှုကိုဂိုဏ်းချုပ်ကြီး သန်းရွှေ အလွန်နှစ်လို လို. ဒေါ်စုက လည်း ဦးရွှေမန်း နဲ.တိုင်တိုင်ပင်ပင်လေး ဆက်သွားနေတာပါ။ ပြည်သူလူထု ဘာထင်ထင် ဂရုမစိုက်တဲ. အတွဲမှာပါဝါနဲ. ကြွယ် ၀ချမ်းသာမှု အရင်းအမြစ်ကို တိုက်ရိုက်ပေါက်တဲ. ဂွင်ကို ဒီအသင်းကသေခြာ ခိုင်ခံ.ပါစေ.မယ်။
လူထုရေးရာ နဲ. စပ်လျဉ်းလို. .ကတော.-လူတွေကို နွားလို.သဘောထားနေရုံသက်သက်ပါပဲ။ ပေါက်ကွဲတော.မဲ. လူထုဒေါသနဲ.သူတို.မရှင်းနိုင်တဲ. အုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာတိုင်းမှာအဖြစ်ဆိုရုံလေး အမည်ခံမျှပြောင်းပြဖို.လောက်သာ အားစူနေကြပုံ ရပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို မရှင်းပဲနိုင်ငံခြားတွေ ခဏခဏ ထွက်ပြတာတွေ၊ တခုခု ကို ကြိုးစားညှိ ယူနေသလို ပုံဖမ်းပြနေတာတွေ၊မြန်မာ.ဒီမိုကရေစီ အတွက် သူတပါးနိုင်ငံက နည်းနာရယူဖို.ထွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ.ခရီးတွေဟာ ဦး သိန်းစိန် ပုံရိပ်၊ ပြီး ဦး သိန်းစိန် ပီအာအုပ်စု အောင်မင်းတို.ပုံရိပ်ကို သာ အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။အမှန်တကယ်ကတော.-အောင်မင်းမွေးထားတဲ. ဒေါက်ခြာတစ်အုပ်စုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထင်ထားသလို သူ.သစ္စာ ခံတွေ လုံးလုံး မဟုတ်ပဲ၊ ဒီပွဲစားတသုတ်ဟာ ပေါင်းစားတတ်တဲ.သူတို. အတတ်ပညာနဲ.သူတို. ဖာသာ တစင်ထောင် တဂွင်ဖမ်း၊ သူတို. နည်းသူတို. ဟန်နဲ.စီးပွား လုပ်စား ဖို. တာ ဆူနေကြသူများသာဖြစ်တယ်။
ဦးအောင်မင်းကိုယ်တိုင် သူတို. စစ်အုပ်စုထွက် တံဆိပ်ဟောင်းတွေနဲ. ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်က လူကြားထဲထွက် တိုင်းသိပ် မတင်.တယ်လို.၊ ဒီမို ယောင် ဆောင် ဒီမို တံ ဆိပ်ကပ်ထားတဲ. အမှန်တကယ် မည်သည်. အလုပ်မျိုးမှဟုတ္တိ ပတ္တိ လူထု ပါလာ အောင် လုပ်မပြနိုင်တဲ. လူ လေးငါးယောက်ကို မွေးပြီးလိမ်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တလ တသောင်းခွဲ စား ၂ ယောက် ဖြစ်တဲ.ဇော် ဦးနဲ.ဦးသန်.မြေးသန်. မြင်. ဦး ၂ ယောက်မှာ၊ သန်.မြင်.ဦး ပါတ်သက်နေတာ ဇော်ဦးပွဲစားလုပ်ထားလို.ဖြစ်တယ်။ စစ် အုပ်စု က သန်.မြင်. ဦး စီက သူ. အိုင်ဒီယာ ကိုဝယ်တယ် ဆိုတာ ထက်၊ ဦးသန်. မြေးဆိုတဲ. နံမည် ကို ၀ယ်ထားတာ သာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းဇော် ဦးက သူတယောက်တည်း ဆို လူ မပြောနဲ. ခွေးတောင် လက်မခံ တဲ. နံမည် ပျက်နံမည်ဆိုး ရှိတဲ.သူမို. ခုလို ပေါင်းစား နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်စု ကို ဘေး က ယှဉ်တိုက် နိုင်အောင် ရည်မှန်းချက်တူ တဲ. သူတွေ အချင်းချင်း ကြို စု ထား တာ သာဖြစ်တယ်။
ခက်တာ ကမြန်မာ နိုင် ငံ မှာ ဘာဘူနိုင်ငံရေးက တော် တော် ထွန်းကားတယ်။ တယောက်ပဲ နံမည်ကြီး၊ ဘာကြောင်.ပဲ နံမည် ကြီးကြီး- သူ. ကို ချက်ခြင်းနေရာ ပေး ဆွဲစိ လိုက်ခြင်းဟာ၊အရည် အချင်း၊ တော် လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်၊ သက်လုံခံနိုင်ရည် အ၀၀နဲ. အမှန်တရားအတွက် ဘာနဲ. မှအလဲ အလှယ် မလုပ်တဲ. နှလုံး ရည်မျိုးရှိသူတွေ မြန်မာ. နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာထိထိ ရောက်ရောက် အလုပ်လုပ်ဖြစ်ဖို. အလွန် ခဲ ယဉ်းစေပါတယ်။
လူကြိုက်နည်းလှ တဲ. အောင်မင်းအုပ်စု (သို.) သမတ အကြံပေး အဖွဲ.မှာ ဦးသန်.မြေးသန်.မြင်.ဦး ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မှာ လူ.ကပ်ပါး ဇော် ဦး ပထမ ပွဲစား စဖြစ်ခြင်းနဲ. ဆိုင်ပါတယ်။ ဇော်ဦး သူတယောက် ထဲ တိုး မရ နိုင် တဲ. ပွဲတက် လူရာ ၀င် မှု မျိုး ကို သူသိတဲ. နည်းနဲ. ဆွဲဖါထေးလိုက်တာ သာ ဖြစ်တယ်။ ဗဟု အုပ်စုနဲ.သူတို.နဲ. နီးတဲ. ခရိုနီပိုင် ဂျာ နယ်တွေသတင်းစာတွေ ၊ အခစား ဖေ.ဘွတ် ရေးစားသမားများကြားမှာတောင် ဦးသန်.ပုံ ဦးသန်.လိုင်း ကိုဓါတ်ပုံတွေ ခဏခဏ တင်ပြီးထုတ်ရှိုးခိုင်းထားတဲ. မီဒီယာ ဆိုက်ဝေါ ဆက်ရှင် တခုရှိတယ်။ ဦးသန်.နဲ. ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ နိုင်ငံရေးပုံရိပ်တွေနဲ. ဘာဆိုင်လို.လဲ။ ဒါပေမဲ. ဒါတွေအားလုံးဟာ သူတို. အစီအစဉ်ကျကျလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ သူတို. မတတ်နိုင်တာ က တော.--လူထုမကျေနပ်မှု၊မုန်းတီးမှု။ ဒါတွေ ပျောက်သွားအောင် ဘယ်သူမှ မတတ်နိုင်ကြဘူး။
ဒီမိုကရေစီ အရေခြုံစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဦးသန်.မြေး မပြောနဲ.။ အလုပ်မဖြစ်တဲ.ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန်တာ ကလခစားတသုတ် မပြောနဲ.။ ယုတ်ဆွ အဆုံး ဒေါ် အောင်ဆန်းစု ကြည်တောင် ၀င်မပြောနဲ.။ဒီလောက် လွဲ ဖယ်နေ တက်တက်စင်မှားနေတဲ. အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်သူတွေက လက်မခံဘူး။ လက်ခံချင်ယောင် ပြနေတာက ပို.စကဒ်တွေ နဲ. မြန်မာ ပြည်ဖြစ်သတင်းတွေမှာပဲ ရှိတယ်။
စီအိုင်အေတော.မဟုတ်၊လခစားတွေသာဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရံပုံငွေတွေ ကို ထိုင်သုံးနေကြတယ်။
မင်းဇော် ဦး ကတော. တလောကသူတို. အောင် မင်းစီမှာ လစာ ကြီးတွေ တောင်း ၊ သူတို. အခွင်. အရေး သက်သက် အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ.မှာ လျှောက် ပြန် သံပေး လုပ်နေကြပါတယ် ဆိုတဲ. ဆောင်းပါးတိုလေး ရေး စဉ်က သူတို.ပဲ မဟုတ်သလို၊ စွေ.စွေ.ခုန်ပြနေပါတယ်။ စီအိုင်အေ ဟုတ်မဟုတ်ဒီတချက်ကြည်. ဆုံးဖြတ်ကြသင်.တယ်။ စစ်တပ်က ငတုံးတွေ ကလည်း တချက်မှ အပြင်မထွက်ဖူးပဲ၊သူတို.နဲ.ပါတ်သက်စကားပြော ဆိုနေတဲ. လခစား သုံးလေးယောက်ကို ရင်းပြီးပြည်တွင်းပြည်ပက စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကို ပြတ်သားစွာ ဆန်.ကျင် အတိုက်အခံ ပြုတဲ.လူတွေအကုန်လုံးကို စည်း ရုံးလို. ရနိုင်တယ် ဆိုတဲ. delusion ဒလူး ရှင်း မဖြစ်သင်.၊ဒီလူတွေ ပဒိုင်းသီးမြိုပြီး သူတို. ဆက်လိမ်လျှင်တောင် လူတွေ သူတို.ကို မယုံကြည်။ညစ်ပတ်တဲ. နိုင်ငံရေး နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ. ပြည်သူ အပေါ် တန်ပြန် က လေးကွက်တွေနဲ. ကလေးကလား လုပ်နေတာတွေကိုလူတွေက စက်စုပ်တယ်။
ဆုတွေထွက်ယူပြနေတာ ပီအာ လုပ်စားနေတယ်ပြောတာ မမှန်လို.လား။ နော် ဝေး နဲ. တခြား စကင်ဒီနေဗီးယန်းနိုင်ငံတွေက လှု တာတွေထိုင်ဖြုန်းနေကြတာကရော မမှန်လို.လား။ ပြီးတော. အထက်က လခစားတွေ တယောက်မကျန်သူတို.ကို အခွင်.အရေးသမားတွေလို. လူတွေက ခေါ်ကြတာ မမှန်လို.လား။ တလအမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ. လခ ၁၀၀၀၀ ကနေ ၁၅၀၀၀ အထိ တောင်းတာ၊တကယ်ဒီလခတွေ ထိုင်ယူနေတာကရော မမှန်လို.လား။
မင်းဇော်ဦး လိုချင်တာက တော.ဇော် ဦးလို တလ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမှာ ပေါ.။ မရလို.သာ ဒီလို နဲ. သူ.တို. လခကိုဖြတ်လိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တလ တသောင်းတနှစ် တသိန်းနှစ်သောင်း၊ဇော် ဦး တနှစ် တသိန်း ရှစ်သောင်း။ ဇော် ဦးလူလည်ကလည်းသူမွေးထားတဲ. မျောက်က သူ.ထက်လခ ပိုကောင်း ဖို. ဘယ်ခွင်.ပြုပါ.မလဲ။ ဥရောပက ၀င်လာတဲ. ငွေတွေ ရဖို. သမတကို မြှုဆွယ်ခဲ.စဉ်က ပရိုပိုဆယ်ရေးလို.အလုပ်ကြီးတွေလုပ် ပေးရ စဉ်က ၊၁၀ သန်းဝင်ရင် ဘယ်လောက်၊ သန်း ၅၀ ၀င်ရင်ဘယ်လောက် ဆိုတဲ. ဇော် ဦးသီးသန်.တောင်းတဲ. ပွဲခ ပါဆင်.တေ.ခ်ျက ဘယ်လောက်လဲ။
သူတို.ထဲမှာ လစာ အနည်းဆုံးက အောင်နိုင်ဦးပါပဲ။ သူတို. အားလုံးဟာ နိုင်ငံရေး အကြံပေးလုပ်နေတယ် သာ ဆိုတယ်။ ဘာမှ ပြည်သူ လူထု အတွက် အကျိုးမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ သန်းေ၇ွှ မွေးခဲ.တဲ. နေ၀င်မောင်အရပ်သား အုပ်စု က လူသစ် အချို.ထပ် ငှားယမ်း ရီခရု.တ် လုပ်ထားတာသက်သက်၊သူတို.ဟာ အနှစ်သာ ရ အားဖြင်. မပြောင်း မလဲ တသမတ်တည်း ဖြစ်နေပြီးစစ်အာ၈ျန်ဒါတွေမှာ လူတွေ မဆိုစလောက်လေး လက်ခံလာအောင်တောင် ဘူးလုံး နားမကွဲရှင်းပြနိုင်စွမ်း ရှိတဲ.သူတွေ တောင် မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို.ကို အောင်မင်း နဲ. သမတ ရုံးက ဒီလောက်များတဲ. လစာတွေ ပေးတော.၊ သမတ ထက်တောင် လခများနေလို. ဝေဖန်သံတွေ မကျေနပ်သံတွေ ထွက်လာ ခဲ. တယ်။ သူတို. အတွင်းစည်းမှာ ကိုဖြစ်နေတဲ.အသံတွေဖြစ်ပါတယ်။
စကင်ဒီနေးဗီးယန်း နိုင်ငံတွေက ရတဲ.ပိုက်ဆံနဲ. ငါးကြင်းဆီ ငါးကြင်းပြန်ကျော် ပြီး ဒိကောင်တွေကို ကျုပ်ကခိုင်းစားထားတာ လို. မကျေနပ်နေတဲ. ဗိုချုပ် အချို. နဲ. လက်ထောက်တွေကို ပေါသလိုလိုရူးသလိုလို လုပ် ဦးအောင်မင်းက အဖြေပေးခဲ.သေးတယ်မဟုတ်လား။ အမှန်က အောင်မင်း ကြီးကိုယ်တိုင် ဒီ ပွဲစားတွေနဲ. ပွဲတော် တည်နေတာ ဖြစ်တယ်။
ဦးအောင်မင်း ကိုယ် တိုင် ဒီ လူတွေ လခတောင်း ကြမ်း တာ လူ တကာ ကိုလျှောက်ပြော နေတာပဲ။ ဒီတော. တပ်ရင်းမှုးကြီးတွေကသေနတ်ပြပြီး ဒင်းကြမ်း ဗြောင်လု ဗြောင်တိုက်တော.တာပေါ.။ စစ်တပ်လုစားတော.နံမည်တအားပျက်တယ်။ဒါပေမဲ.- ငြိမ်းချမ်းရေးဆန်တာ က ခေတ်သစ် သူခိုးတွေကတော. ကံထူးစွာ ကြောင်သူတော်လုပ်ခွင်. အထူးလိုင်စင် ရထားတယ်။ မင်းဇော် ဦး က လည်းတလောက လူ မိသွားတာသူမခံ နိုင် လို. တောင် ပြောမြောက်ပြော ရမ်းနေ သေးတယ် ဆို လျှင်၊ သူ. ထမင်း ရှင်ဦးအောင် မင်း ကြီး ပါးစပ်နဲ.တခြား မမြင်ရတဲ.၊ နတ် မျက်စီ နတ် ပါးစပ်တွေ အကုန်လုံးသေသေချာချာပိတ်ထားဖို.ကောင်းတယ်။ပြည်သူ.ဘက်တော်သားတွေက တော. ပြောစရာ ရှိတာပြောရမှာပဲ။ သူခိုးလူလူ ဟစ်တာမျိုးတော. လောကကြီးကနေရာတိုင်းမှာ ပေါပေါရောရောဆက်တိုက် ခွင်.ပြု ပေးလိမ်.မယ်မထင်ဘူး။
အေဘီ ကို မုန်းတဲ.၊ အေဘီ တပ်ကိုမလိုလားတဲ. ၄သိန်းတပ်မဟာချုပ်များ၏ စိတ်ရော ဂါ
တော်လှန်ရေးမှာ အနေကြာ၊ ဘယ်နိုင်ငံမှမရောက်၊ သောင် ပြင် မှာ တွယ် ရာမဲ. နေဆဲ အဆင်မပြေသေးတဲ. အေဘီ ရဲဘော် တွေ အနာ ၈တ်ရေး ရာအတွက် သူငယ်ချင်းတွေ ရဲဘော်ကောင်းတွေ မခံနိုင်တဲ.သူတွေက စိတ်ပူကြတယ်။
မြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ. ဘာမှ လည်းမဖြစ်၊ အောင်မင်းတို.ဘေးမဲ.ပေးထားတဲ. ဒေါက်တာနိုင်အောင် ပဲ ထွန်.ထွန်.လူးမတတ် အထဲမှ အခြေချချင်နေတာဆိုပါတော.။မန်းကစစ်ထောက်လှန်ရေးတွေ၏ မိတ်ဆွေ ကြီးငယ်တွေနဲ. စီးပွားဖြစ်နေတဲ.သူတွေက လည်း၊ အမြုံတွေထက်တောင်ညံ.ဖျင်းသေးတယ်။ မြောက်ပိုင်းကိစ္စ ဗန်းပြ ပြီးလို. လေနဲ. ၀သွားလေတော.ခု မျက်နှာ ဗြောင်တိုက်ပြီး အမှန်တရား ဆိုတာ ဂျိုနဲ.လား လို. သူတို. ကိုလှမ်းမေးရမလို ဖြစ်နေတယ်။ စစ်အုပ်စုဟာ လူရွေးတတ်ပါတယ်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ.စစ်ဥပဒေကို တောက်လျှောက်ဆန်.ကျင် ကြည်.၊ ပြည်တွင်းမှာ အမှန်တရားဆိုတဲ. အလွန် ရှားပါးတဲ.အရာကို တိုင်လေး တခုမှာ မြဲအောင် ပူးချည် ဖို. နှီးကြိုးလေး တချောင်း လိုက် ရှာ ရင်တောင် တော် တော် ခဲ ယဉ်းစွာလိုက်ရှာ ရလိမ်.မယ်။ ပေါင်းစားမလား၊ ရတယ်။ သူတို.တို. ကြိုက်တာ တွေ ပြော မလား၊ရေးမလား၊ ရတယ်။ စစ်အုပ်စု နှစ်သက်တဲ. ထပ်ကာထပ်ကာ ကြားချင်တဲ. သတင်းခေါင်းစဉ်မှာမြောက်ပိုင်းဇတ်လမ်း ပါလေ ရဲ.။
အရေးယူတဲ. အဆင်.ထိရောက်အောင်တော. စစ်ထောက်လှန်းရေးနဲ.သူတို. မီ ဒီယာတွေက စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ကိုယ်.ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းသလိုဖြစ်သွားပြီး မန်းက သတင်းပေးတွေ လူမိသွား နိုင်တာမို.၊ ၂၀၁၂ နှစ် တလျှောက်လုံး အေဘီကို ထိုးနှက်ရုံ့သက်သက် ရေးသားခဲ.သူတွေက တော. အချိန်တခုအထိ နဲနဲ ထပ်စောင်.ပါ ဆိုတဲ.စကားနဲ.လူတွေကို ဆက် လှည်.စားနေကြဆဲဖြစ်တယ်။ စောင်.ခိုင်းထားတဲ.ကာလမှာ အေဘီကို အနု အကြမ်း နည်းတွေသုံး အတင်းဝင်ဖျက်ဆီးတော.တယ်။ အော်ဆီက ထောက်လှမ်းရေးသတင်းပေးမက ဥရောပ က ထောက်လှမ်းရေးသတင်းပေးထီးတယောက်ကို အချက်အလက် အရ ကူညီပြီး၊ စစ်အုပ်စု မုန်းတီး ကြောင်၇ွံ.တဲ. သူတယောက်ကို ကျတော.ချက်ကြလက်ကျ ပိတ်ဆို. ဒုက္ခပေး လုပ်တတ်ကိုင်တတ် လိုက်ကြတာမှ၊ အတိုင်အဖေါက်တွေညီဆိုဖွယ်ရာကို မရှိဘူး။
ဒီနေရာမှာတော. လက်သွက်ခြေသွက်တွေမို. တားလို.တောင်မရ၊စောင်.တောင်မစောင်.နိုင်၊ ၃၈ ယောက် ပြုတ်ခဲ.ရပါတယ်လို. ငိုခြင်းချတဲ. မင်းသမီးမင်းသားတွေ အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ရုံးက စပိုင်တွေ သူတို. အမျိုးတွေညွန်ကြားချက်အတိုင်း ကစားနေကြတယ်။ စစ်အုပ်စုအတွက် အလုပ် လုပ်ပေးနေတယ် ဆိုတာတော်တော် ပေါ်လွင်နေတယ်။ ၃၈ ယောက် ကိစ္စ မှာ ဘယ်သူက ဘယ်သူ.ကို စောင်.ခိုင်းထားပါသလဲ။
မက်ဆင်ဂျာ ဂျာနယ် က ထိုးဖေါက် မွှေနှောက်ထားတဲ.ခရစ်တစ်ကဲလ် မေးခွန်းများ ထုတ်သင်.တယ်။ ဒေါက်တာ နိုင်အောင်ကို ဗျူး စီးပွားရှာစားနေတဲ.မြစ်မခက ကြဲ.ဖွတ် သတင်းထောက်မလည်း ဒီလို ခရစ်တစ်ကဲလ် ဖြစ်တာတွေ မရေးသင်.ပေဘူးလား၊ စဉ်းစားမိတာကိုပြောတာပါ။ လူထုအတွက် စေတနာ မရှိပဲ ၊မီဒီယာ ကို ဖင်ခု ထိုင် ညစ်ပတ် နေသူတွေကိုအထုးစက်စုပ်တယ်။ ကိုယ်.အလှည်.ကျရင် တော. ပြန် ပေးဆပ်တတ်ရမယ်။ ညစ်ပတ်တိုင်းမကောင်းဘူး၊ လုပ်လို.ရလို.လုပ်တယ်ဆိုတဲ. အတ္တ လည်း တချိန်မှာ အဆုံး ရောက် သွား နိုင်ပါတယ်။မျှတစွာ လူလိုသူလို စဉ်းစားနိုင် ကြဖို. ပါ။
အေဘီ အက်စ်ဒီအက်ဖ် ကို ပူးသတ် လာဘ်ထိုး ဖျက်ဆီးနေပြီ လော
ဖျက်တာတော. မရ ရတဲ. နည်းနဲ.၀ိုင်းဖျက်နေကြတယ်။ အောင်မင်းဟာ လူတိုင်းကို ချဉ်းကပ်ရာမှာ--သူနဲ. ပူးကပ်နေတဲ.ဇော် ဦး၊ မင်းဇော် ဦး၊ ညိုအုန်းမြင်.၊ သန်.မြင်.ဦး၊ အောင် နိုင်ဦး စတဲ. လူတွေနဲ. ပေါင်းစား လုပ်စားရသလောက် မလွယ်မှန်းသိပုံရတယ်။ ဒါပေမဲ.ခုထိ ကျန်နေသေးတဲ. တဲ. ရဲဘော်ကောင်းတွေ၊ရှိသေးတယ်။ ပြီးတော.-- သူများ လှည်.ရင် လှည်.တိုင်း လှိမ်.ခံရမဲ.သူများလည်း အထီးကျန်စွာ ဘေးမှာ ကျန်နေခဲ.သေးတယ်။ ရွေးချယ်စရာ ရှားပါးတဲ. အနေအထားမှာ လူတိုင်းသူသူ ကိုယ်ကိုယ်အကာ အကွယ် မဲ. တတ် ကြပါတယ်။ ဒါကို ငြိမ်းချမ်းရေး မစ် ရှင် အဖွဲ.က ထောင်ချောက်ပြုပြီး တော်လှန်ရေးအင်အားစု များကို ထောင်ဖမ်း ကြပါလိမ်.မယ်။
သူတို. နဲ. ပတ် သက်ပြီး ဒီအေဘီ လက်ကျန် ကောင် တွေကိုဘယ်လို လုပ်လိုက် ဘယ်လိုကိုင် ဘယ်လို ကျွေးလိုက် ဘယ်လိုလုပ် လျှင် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို သာခွေ ယိုင်သွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ.ဂျပန်အလိုတော် ရိ သတင်းပေး က ရော ဘယ်သူပါလဲ။
ဇော် ဦး တို. မင်းဇော် ဦး တို.မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ကို ရင် ညွှန်.မှာ အပ်ပြီး အေဘီရဲဘော်တွေ နဲ. တခြား နိုင်ငံအသီးသီး ရောက်နေတဲ. ရပ်တည် ချက်ရှိသူများတွေ ကို တစစီဖဲ.ပြီးဖျက်စီးမဲ. အကြံတွေ မရှိပါဘူးလို. ကျိန်ပြောခဲ.ရင်တောင်ဦးအောင်မင်းရုံး အပေါက် စောင်.က အစ ယုံ မှာ မဟုတ် ဘူး။ ဒေါက်တာ နိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်အေဘီပြန်ဝင်ရေး ဦးဆောင် လှုပ်ရှားမှု မှာ လုံးလုံး မသန်.စင်ဘူး။ သူတို.ကိုယ်သူတို. အသိဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲဘော်ကောင်းတွေကို ရောင်းစားနေကြတယ်။ မခံကြနဲ.၊
အေဘီကို တောင်းစားတဲ. အသွင်ဖြစ်အောင် မနှိမ်.ချနဲ.။
တက်ဆီင်္အစီး၆၀ ဟာ လာဘ်ထိုးခြင်းလား။
တက်ဆီအစီး ၆၀ က ပြဿနာလား၊
အေဘီ ရုးံခန်းမဖြစ်မနေ ဖွင်.ရမဲ. လိုအပ်ချက်ကသာ စစ်အုပ်စုအတွက် ပြဿနာမဟုတ်ပါလား
အထက်က ပွဲစားတွေ နဲ. စစ်အုပ်စုကိုယ်စားလှယ် တွေ၊ သူတို. နေ.တဒူဝပြောဆိုနေတဲ. ခေါင်းစဉ်တွေကဘာတွေ တုန်း။ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်သူ.စီမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရဖို. ဘယ်သူက အီးမေးပို. မယ်၊ဘယ်သူကဖုန်းခေါ်မယ်။ ဘယ်သူက ဖေါလိုး အပ် ပ် လုပ်မယ်။ ဘယ်သူက ခရီးထွက်မယ်။ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ် အကျန်တွေနဲ. စစ်အုပ်စုကို ဆန်.ကျင် နေတဲ. သူတွေကို ဘယ်သူက ဘယ်သို.၊ဘယ်သူ. ကို ဘယ်လိုလုပ်၊ ဘယ်ကောင် ကို ဒီလိုဖြုတ်၊ ဒီကောင် တွေ ကို ဒီ ဟာပေးရင် ဟိုဟာဖြစ်လိမ်.မယ်။ ဒီကောင်တွေ တောင်းတိုင်းမပေးနဲ.။ ရုံးဖွင်.ခွင်.ရသွား ရင်အေဘီ ဟောင်းတွေ တကျော ပြန်ထ ကြွလာလိမ်.မယ်။ ဒါမျိုး တွေ ၀န်ကြီးတို.က လုပ်မပေးရဘူးစသဖြင်. ၊ ဒိကောင်တွေကို တက်ဆီ ၅ စီး ၁၀ စီးလောက်နဲ.ပဲ မရ ရ အောင် ဈေးဆစ်၊ ဒီ လိုယုတ်ညံ.တဲ. စကားလုံးတွေ ဘယ်သူ. ပါးစပ်က ထွက်လာတာလည်း။
ဒီစကားမျိုးတွေပြောကိုယ်စောင်.နတ် လုံးလုံးလျားလျား မရှိတဲ. ဘယ် မြေခွေးများ က ငြိမ်းချမ်းရေးဆန်တာမှာမွှေနေ ရှုတ်နေပါသလဲ။
ဧပြီ ၂၉ ၂၀၁၃
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 6:21 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook